Ifama sinombuki zindwendwe onguMark And Suzanne
Ikhabhathi yethu yesithathu etofo-tofo eyenziwe ngezandla, ebekwe kwifama esebenzayo kumbindi wehlathi laseDalby. Ilungele izibini okanye iintsapho. Ikhabhathi yethu epholileyo, eshushu inefriji kunye neketile enezixhobo zokwenza iti nekofu, kwaye inegumbi lokuhlambela eline-ensuite elineentsimbi zetawuli ezifudumalayo. Yonwabela iimbono ezimangalisayo ezisuka kwindawo egqunyiweyo yokuhombisa. Kufuphi neziko labatyeleli baseDalby kunye neekhilomitha ezingama-30 zeendlela ezimangalisayo zeebhayisekile zeentaba. Sibonelela ngesidlo sakusasa selizwekazi eliziswe emnyango, kunye ne-gas bbq yokupheka.
Le ndlwana intle ibutofo-tofo ngokumangalisayo. Sazakhela ngamaplanga asuka kuwethu efama, nothando olukhulu! Ikhabhinethi yaseDahlia igqunyiwe kwaye ifudunyezwe kakuhle ukuze ube shushu kwaye upholile kuzo zonke iinyanga zobusika! Iibhedi ezimbini eziphindwe kabini zenziwe ngebhedi entle, eziye zachazwa njengezona bhedi zininzi iindwendwe ezikhe zalala kuzo. Igumbi lokuhlambela le-en-suite lineshawari eshushu, enamandla, isitya sezandla kunye nendlu yangasese. Iitawuli ezimhlophe ezimfumamfuma zibonelelwa kumzila wetawuli oshushu. Sibonelela ngeketile, kunye neti, ikofu, iswekile kunye neti yeziqhamo. Kwakhona ifriji encinci enobisi olutsha kunye nendawo eyaneleyo yokupholisa ukutya kwakho. I-picnic hamper iqulethe iipleyiti kunye nezinto zokusika. Kukwakho netafile ethandekayo yamaplanga kunye nezitulo ngaphakathi. Sifake i-Smart TV ukuze uphumle kubusika obubandayo! Sikwanayo neWiFi yasimahla.
Isithuba esingaphandle sinendawo yokuhombisa eyenziwe ngomthi enophahla kunye nodonga olunye lwe-perspex. Kukho izihlalo ezitofotofo, ezigudileyo kunye netafile yekofu, ejonge kumbono oqaqambileyo wefama yethu, kunye nehlathi. Amasimi aqengqelekayo aneenkomo neegusha amadlelo. Kwakhona kwindawo yokuhombisa kukho i-BBQ yerhasi ye-Dahlia yeKhabhinethi enebhotile yerhasi. Ikhabhinethi nayo inendawo yayo yegadi kunye nendawo yokupaka yabucala eqingqiweyo.
Isidlo sakusasa esimnandi selizwekazi siziswe sithi kwikhabhinethi ngexesha olithandayo. Oku kuziswa ngeengobozi kwaye kuqulethe iipastries ezishushu, iziqhamo ezitsha ezinqunqiweyo, iiyogathi ezikhethiweyo kunye nezigciniweyo, iisiriyeli kunye negranola, ijusi yeziqhamo kunye nobisi. Oku kulungele abantu abatya imifuno kwaye sinokubonelela ngezidlo ezingenayo i-vegan kunye ne-gluten ngesaziso esincinci. Le yindawo efanelekileyo yokuhlala kwiintsapho ezifuna ukubaleka efama, izibini zekhefu lothando kunye namaqela abahlobo. Ekuphela kwento esiyicelayo kukuba uphumle, uphumle kwaye ube nekhefu elimnandi!
Iimayile ezintlanu ukusuka kwilali ekufutshane, ifama ijikelezwe ngamawaka asixhenxe eehektare zehlathi, ibonelela ngendawo enoxolo apho ngethamsanqa unokubona izilwanyana zasendle ezimangalisayo kubandakanya iinyamakazi, iibheji, iimpungutye, izikhova kunye nezinye iintaka. Sineenkomo neegusha efama, kwaye siyavuya ukunika 'iqebengwana leegusha' ukuze abantwana bondle amatakane kwidlelo elisecaleni kwegadi. Siziikhilomitha ezili-15 ukusuka eScarborough, malunga. Iimayile ezingama-20 ukuya eWhitby, kunye neekhilomitha ezi-6 ePickering.
4.96 · Izimvo eziyi-188
Umbuki zindwendwe ngu- Mark And Suzanne
UMark And Suzanne yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Langdale End